Somaliland oo jawaab culus siisay Maamulka Puntland - Awdinle Online
Somaliland oo jawaab culus siisay Maamulka Puntland
Maamulka Soomaliland ayaa si kulul uga jawaabay hadal dhawaab kasoo yeeray Maamulka Puntland ee ahaain ay gacanteeda ku soo celinayso magaalooyinka Laascaanood iyo Ceerigaabo oo ay mamusho Soomaaliland.
Wasiirka Arrimaha Bulshada Somaliland, Mustafe Godane ayaa sheegey in aysan wada gaarin gobolka Sanaag, balse ay iyagu ka arrimiyaan gobolka Sool oo dhan waa sida uu hadalka u dhigaye
“Wasiirka Puntland haddii uu furo daqaadda xafiiskiisa Garoowe, wuxuu arkayaa ciidamadeenna oo dul jooga”. Ayuu Wasiir Godane oo saxaafadda kula hadlay Magaalada Hargeysa.
Wasiirka Arrimaha Gudaha Maamulka Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancad oo dhawaan su’aalo lagu weeydiiyay Aalada clubhouse ayaa sheegay in dhawaan Puntland ay la wareegeyso celinayso magaalooyinka Laascaanood iyo Ceerigaabo ee Gobolada Sool iyo Sanaag.
Previous articleMadaxweynayaasha Puntland & Jubbaland oo dalab u gudbiyay Beesha Caalamka
Next articleDowladda Soomaaliya oo qoraal adag u dirtay Golaha Ammaanka ee QM